အောင်လံမြို့နယ်၌ အခြေခံပညာကျောင်းများ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်၊ KG တန်းမှ အဋ္ဌမတန်းအထိ ၁ဝဝ ရာခိုင?? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့နယ်၌ အခြေခံပညာကျောင်းများ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်၊ KG တန်းမှ အဋ္ဌမတန်းအထိ ၁ဝဝ ရာခိုင??
အောင်လံ၊ ဧပြီ ၂၁
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်၌ ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် KG တန်းမှ နဝမတန်းအထိ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို ဧပြီ ၂၁ရက် နံနက် ၆ နာရီကထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးရာ KG တန်းမှ အဋ္ဌမတန်းအထိ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၃၅ဝဝဝ ကျော် ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ပြီး နဝမတန်းတွင် လေး ရာခိုင်နှုန်းကျရှုံးကြောင်း မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
”ဒီနေ့ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်းမှာ ကျောင်းတွင်းစစ်စာမေး ပွဲအောင်စာရင်းတွေကို တစ်ပြိုင်တည်း ထုတ်ပြန်ကပ်ပေးထားပါတယ်။ KG တန်းကနေ ရှစ်တန်းအထိက ရာနှုန်းအပြည့် အောင်မြင်ပါတယ်။ ကိုးတန်းကတော့ လေးရာခိုင်နှုန်းကျ ရှုံးမှုရှိပါတယ်”ဟု အောင်လံမြို့ ဒုပညာရေးမှူး ဦးထွန်းလင်းက ပြောကြားသည်။ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများတွင် KG တန်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၃၆၅၉ ဦး၊ ပထမတန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၃၉၇၄ ဦး၊ ဒုတိယတန်း ၅၁၉၅ ဦး၊ တတိယတန်း ၄၄၂၇ ဦး၊ စတု တ္ထတန်း ၄၂၁ဝ ဦး၊ ပဉ္စမတန်း ၄ဝဝ၅ ဦး၊ ဆဋ္ဌမတန်း ၃၆၂၅ ဦး၊ သတ္တမတန်း ၃၃ဝ၅ ဦးနှင့် အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၃ဝ၅၅ဦး စုစုပေါင်း ၃၅၄၅ဝ ဦးရှိရာ ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးအောင်မြင်ကြောင်း မြို့ နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ အထက (၁) ကျောင်းကတော့ နံနက် ၅ နာရီကစပြီး အောင်စာရင်းတွေကပ်ပြီး နံနက် ၆ နာရီမှာ ကျောင်းအတွင်း ဝင်ခွင့်ပြုကြည့်ရှုစေပါတယ်။ အောင်ချက်က ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်ပါတယ်”ဟု အောင်လံမြို့ အထက (၁) ကျောင်းမှ အထက်တန်းပြဆရာ ဦးမြင့်စိုးက ပြောကြားသည်။ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း နဝမတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၅၉၇ ဦးရှိရာ ၂၄၉၃ ဦးအောင် မြင်ပြီး ၁ဝ၄ ဦင်္း ကျရှုံးကြောင်း မြို့ နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှသိရသည်။
ရွှေကူမြို့အနီး စိုက်ပျိုးထားသည့် တစ်ရှူး ငှက်ပျောမျိုးအဖီးများ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တစ်ရက် ကာ
ထောင် အပြောင်းအရွှေ့အပေါ်အခြေခံသော စစ်တွေထောင်ဖောက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး စတင်
လူမှုကွန်ရက် facebook ကြောင့် ပြိုကွဲသွားခဲ့သော အသိုက်အမြုံလေးများ
တောင်ကိုရီးယားက ကမ်းလှမ်းသော ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ဆွေးနွေးပွဲကို မြောက်ကိုရီးယား ?
ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုမှာ လေယာဉ်မယ် အရမ်းဖြစ်ချင်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထ??
သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ မြောက်ကိုရီးယားသို့ သွားရောက်ရန် လိုလားလျက်ရှိ
လမ်းလျှောက်လာသူကို မသင်္ကာ၍ စစ်ဆေးရာမှ ဖုန်းသုံးလုံးတွေ့ရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မပြနိုင်၍ အေ
ရနောင်း လူသတ်မှုတွင် အယူခံနိုင်သဖြင့် ပြန်လွတ်လာသူ မြန်မာနှစ်ဦး အကူအညီပေးခဲ့သည့် ဦးဇော်ဇော်ကို သွားရောက် ဂါရဝပြု
Share 710 Tweet 0